ကိုယ့် နှလုံးသား ဒီ ငရုပ်သီးလေး စားမိသလို – Chilli | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ကိုယ့် နှလုံးသား ဒီ ငရုပ်သီးလေး စားမိသလို – Chilli
ကိုယ့် နှလုံးသား ဒီ ငရုပ်သီးလေး စားမိသလို – Chilli
Posted by ဇီဇီ on Oct 4, 2014 in Environment, Home & Garden, Photography, Society & Lifestyle | 55 comments
ဒီ ငရုတ်သီးလေး စားမိသလို
ရင်ထဲ ပူပြီး တကယ်စပ်တယ်
ဂုတလော နေရထိုင်ရ ခံစားရတာ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်နေလို့။
ဒါ ကို Red Hot Chilli Pepper Spice ခံစားချက်လို့ ခေါ်တယ်။
ခရမ်းရောင် ငရုပ်သီးတော့ ခုမှ မြင်ဖူးတာ။ စားရင်ကော ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။
ဒီ က ပန်းတွေက မမွှေးဘူးး
တခါက တယောက်က ပြောဖူးတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ Metaphor က ငရုတ်သီးဆိုပြီး
အရောင်ကလည်း စူးတယ် စားရင်လည်း စပ်တယ် စပ်စပ်ထိမခံလို့ဆိုပဲ
တို့ လည်း ခု မ ဆွိ တော့ ပါဘူးကွယ်ကွယ်
ဘယ်လိုချက်တုံး .. ရေလုံ့ပြုတ်လား ဆူရှီလိုလား….
လူသားလဲ ဂျင်း၊မဆလာ…နိုင်နိုင်ထဲ့ရင် စားကောင်းမှာပါအေ
နာ နဲ့ အလုပ်ကိစ္စ ပြောနေကျ လူဂျီးက
သူစိတ်မကြည်ရင် နာ့ ကို မဆွိတော့ဘူး
မစ်(စ) Bitter လို့ ခေါ်ခေါ်နေတာ။
နာ လည်း ဘာမှ မလုပ်ရပါပဲနဲ့။ (ကွကိုယ်တော့ ဂလိုပဲ မှတ်တာ)
ဒါနဲ့ ဟိုခရမ်းရောင်လေးက အတော်စပ်မယ်ထင်
အနီ က အစပ် ဆုံးးး
မိုးမျှော် သီး တွေမို့ နေမှာပေါ့။
Starch ရေ… အလုပ်များနေတယ်…. ထင်တယ်… ပလိုင်းတောင် မလုပ်နိုင်ပါလား..
I m at outside…
All are chili and they show how it can grow at the exhibition.
စားစရာမှတ်​လို့ ဆိုင်​နာမည်​ထင်​ထားတာ။ ဒီအတိုင်းစားလို့ရဘူး။❆ :-(
အစပ် ကြောက်သလား အိုင်းရစ်လေးး
အစပ်​​ကြောက်​လွန်းလို့ထင်​တယ်​။ ကြက်​​တောင်​ပံအစပ်​စားပြိုင်​ပွဲသွားမလား​မေးခံရတယ်​။စားနိုင်​ရင်​ အလကား စားရမှာ။ ဟီး။ ကြက်​​တောင်​ပံမကြိုက်​လို့မသွားခဲ့ဘူး။ ​ရေခဲ​သစ်​တာထဲမှာ မပြတ်​ရှိ​နေတာက ငရုပ်​သီးစိမ်းရယ်​ သံပုရာသီးထုတ်​ရယ်​။ ဟီးဟီး
နောက်ပြီး ငပိ၊ ငါးခြောက် ပုဇွန်ခြောက်မပြတ်ဘူးးး
နောက်တစ်ပတ် ထမင်းဆိုင်မှာ အဲဒါရေးမို့ လေးလေးကြည်ရဲ့ ငပိဖျော်နည်းလေး ခရက်ဒစ်ပေးပြီး ယူမယ်နော်။
ဟားဟား မသိ​တော့ဘူး ဘာ​ရေး​ပေးခဲ့မိမှန်း။ ကြိုက်​သလိုသာသုံး အပိုင်​​ပေးလိုက်​တာ။ ​ဧရာဝတီတိုင်းသူဆို​တော့ ငပိကိုမျိုးစုံစားခဲ့ဖူး​ပေမဲ့။ဒီမှာမရှိဘူး..ငတ်​တယ်​.မစားရတာ​တောင်​ကြာ​ပေါ့။ :-(
.ငြုပ်သီးတော့ ငယ်ငယ်ကတော်တော်အစပ်စားနိုင်တယ်…ရွှေအပ် လို့ခေါ်တဲ့ မိုးမျှော်ငြုပ်မှစားတာ
ငရုတ်ပင်က ဘယ် အပင်ဖြစ်ဖြစ် အိုး နဲ့ စိုက်လို့ ရတယ် မိုက်မိုက်။
သူတို့က များများသီးအောင် လုပ်ထားလို့သာ။
အိမ်သုံးကတော့ သာမာန် ငရုတ်ပင်လည်း နိုင်တယ်။
ငြုပ်​သီး ဂျု့စ်​လုပ်​လို့ရလားဟင်​… ဆမ်းဝမ်းကိုအ​မော​ပြေတိုက်​မို့..
ငရုတ်သီးရယ်၊ ငရုတ်ကောင်းရည်လေး ရယ် ဖျော်ပြီး အမူးပြေ အဲလေ အမောပြေ တိုက်လို့ကောင်းတယ်လေ
ဂေါ်ဖီ၊ကြက်သွန်၊မုန်လာဥ၊ ခါဂျစ်ဥ.. စတာတွေတော့မြင်ဖူးစားဖူးတယ်..။
ပြောကြတာကတော့.. ခရမ်းရောင်တွေက.. ပိုအဟာရဖြစ်ဆိုပဲ..။
အခုထိတော့.. ကျုပ်ကိုယ်တိုင်.. ယိုးဒယား၊ ကိုရီးယား စသဖြင့် သူတို့အစာတွေစားဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေပါနေသေးတယ်..။
What Countries Eat Hot & Spicy Foods?
By Karen Lac, eHow Contributor , last updated June 25, 2014
Chili peppers are native to Mexico and have been used as an ingredient for thousands of years. Mexico hasalot of dishes that use chili peppers as an ingredient and condiment. Poblano peppers, which are dark green and vary in hotness, are one of the most used chili peppers in Mexican cuisine. Chile relleno is roasted poblano pepper stuffed with meat or cheese, covered in egg batter, and fried. Mole poblano isadark sauce made from poblano peppers, chocolate and other ingredients that is served over meat. Jalapenos are very hot peppers that are used often in salsas and marinades. Other types of chili peppers used often in Mexican cooking is habanero, chipotle and serrano peppers.
သများတို့မှ အဲဒီ အစားအသောက် မစားဖူးပဲဟာ။
နောက်ဆို.. စပ်ပေ့.. ငရုပ်ဆော့စ်တွေ.. လူကြုံထည့်ပေးလိုက်မှနဲ့တူတယ်..။
ရွာသူားထဲ.. အစပ်ကြိုက်တဲ့သူတွေ.. သိပ်ရှိပုံတော့မရ..။
စလုံး လူကြုံရင် ပေးလိုက်နော်။
အကြိုက်ဆုံး အရသာက အချိုနဲ့ အစပ်။
ဒီတလော.. အစိမ်းတွေများသမို့.. ကြယ်၎ပွင့်ရ.. မှုးကြီးဖြစ်နေပြီ
မြန်မာမှာ… စပ်တာရယ်.. ပူတာရယ်ရောပြီး. ပူစပ်ပူလောင်ရယ်လို့တော့ရှိတယ်..
အဲဒီထဲ.. ဂျပန် ၀ါဆဘိလိုအစပ်မျိုး..။
ဆီချွမ်ငရုပ်ကောင်း szechuan pepper လို.. အလောင်ပူမျိုး..။
မတ်စတပ်လို.. အပူမျိုး.. အရသာပေးရန်.. အမည်မရှိ…ဟု.. ထင်..။
သိသူများ… နာမယ်ကင်ပွန်းလေး.. တပ်ပေးကြစေလို…။
နောက်ဆုံး ကြယ် က ဒီမှာ အနော် ပေးလို့ ရတာ။
ယားလှလိုက်တာ။ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး အပင်တကာ့အပင်ထဲ ငရုတ်ပင်ကိုအကြိုက်ဆုံး။ သဘောအကျဆုံး။ အစိုက်ချင်ဆုံးပဲ။ ရောက်လေရာအရပ် ငရုတ်ပင်ပဲစိုက်တာ။ အခုများမြေကလေးနဲ့နေရရင် ပထမဆုံးစိုက်မှာငရုတ်ပင်ပဲ
အနော် ခု အပင်စိုက်ထားတယ်
နံနံ နဲ့ ကြက်သွန်နီမိတ်။
ငရုတ်က မျိုးစေ့မရသေးလို့ မစိုက်ရသေးဝူးး
ငရုတ်ပင်က ငရုတ်သီးအရင့်အစေ့စိုက်ရတယ်လေ အိမ်မှာတော့ အိုက်လိုပဲပျိုးတာပဲ
အ၀င်ပူ အထွက်ပူ တဲ့ ငရုတ်သီး
သူမပါ ရင် လဲ မပြီး
မှတ်မှတ်ရရ ပန်းတနော်အလှူသွားတုံးက အဲဒီရွာမှာ လှမ်းထားတဲ့
ငရုတ်သီးတွေတော့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဘူးတယ်
လှမ်းတဲ့နားက မွှန်မှာပဲ နော်။
မမခိုင်ဇာရဲ့ ငရုပ်ပင်တွေကို မြင်တော့မှ
လောကဂျီးကို သဘောပေါက်သွားတယ် ….
ငရုပ်သီးတွေ စုနေတဲ့ လောကဂျီးပါတကား ….
စပ်သော နှလုံးသား ပိုင်ရှင်တွေချည်းသာ..
အဲဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ မြင်ရင်..ဖွေးဖွေးကို သိပ်သတိရတာပဲ…
ဘယ်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ဆေးဆိုးရမယ်လို့။
အဲလာ ခရမ်းသီးနဲ့ငရုတ်သီး က မွေးတဲ့ အပင်။
ငရုတ်ဆိုတဲ့ အကောင်က သစ္စာရှိပါတယ်အမကြီး…
ကျွန်တော့်ကို စားရင် စပ်ကို စပ်ရပါမယ် ကတိပေးပါတယ်…
ဟိုကောင် သူရိန်သောက်တဲ့ အရက်လို မူမမှန်တာ မပါပါဘူး…
ဒါပေမယ့် အမကြီး အပင်က ချက်ချင်းခူးစားပါ….
အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို လူတွေက အရောင်ဆိုးပါတယ် အမကြီး…
သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို အမှုန့်ဖြစ်သွားတဲ့ အထိထောင်းတာတောင် အားမရဘူး အမကြီး..
ဆိုးသောဆေး ဆိုးဆေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လည်း ဆေးဆိုးကြပါတယ်… နောက်ပြီး…
သူတို့က ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း တစ်ခါတရံ ပါတောင်မပါဘူး အမကြီး… ငရုတ်ဆီဆိုပြီး ညာရောင်းပါသေးတယ်… လူတွေက ကျွန်တော်တို့ မျိုးရိုးကို သိပ်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ် အမကြီးဇီ…
အခုအမကြီး ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးလို့ ခရမ်းရောင်လေးတွေ ရှိပါတယ်ဆိုတာ ပုံနဲ့တကွ တင်ပြတာတောင် ဟိုလူ အလင်းဆက်က အရောင်ဆိုးထားတာလားတဲ့…
ငရုတ်ဘဝက ဆိုးပါတယ် အမကြီး… မျိုးရိုးဂုဏ်ကို မစောင့်ထိမ်းနိုင်လို့ ခံစားရပေမယ့်…
အမကြီးအခုလိုတင်ပြပေးတာအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့… ကိုသူရိန်ဆိုသော ငမူးမှာလည်း… ကျွန်တော်တို့ကို အလွန်အားပေးပါတယ် အမကြီး… ဒီလူ လကုန်ရက်နားကပ်ပြီး… မူးလာတဲ့နေ့တွေဆို ဘိုင်ပြတ်ပါတယ် အမကြီး.. ဒီလူ အရက်ကို ငရုတ်သီးနဲ့ ဆားတို့ပြီး မြည်းပါတယ်… အမကြီး… ဒီလူ သိပ်သစ္စာရှိတယ်အမကြီး… သူကြီးအိမ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ အိုးထဲက နှုတ်ပြီးတော့ကို အမြည်းလုပ်ရဲတဲ့ သတိလည်း ရှိတယ်အမကြီး… သတ္တိမသေးပါ… ထိပ်တုံးလည်း မကြောက်တတ်ဘူးထင်ပါတယ်… အမကြီး…
ဒီလူဟာလတိုင်း သစ္စာရှိရှိ ကျွန်တော်တို့ကို အမြည်းအဖြစ် ငရုတ်အရသာကို ခံစားလေ့ ရှိပါတယ် အမကြီး… ပြောရင်းတောင် မျက်ရည်လည်လာပြီခင်ဗျ….
ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးချင်ရင် ငရုတ်သီးကို ဒီးအတိုင်း စားပြီး ဒီ comment လေးကို ဖတ်ပေးပါအမကြီး… အမကြီးပါ မျက်ရည်လည်လာရပါမယ်..
ဂလောက် စကားများ စကားတတ်မှတော့ မန်းသားထင်ပါ့။
ငရုတ်သီးစပ်စပ်ဘဲ ကြားဖူးတယ်… ငရုတ်သီးဖွေးဖွေးတော့ ကြားဖူးဘူး…
ဖွားဇီရဲ့ ငရုတ်ပင်တွေကို တွေ့တော့ ငယ်ငယ်က ဖွေးဖွေးနဲ့ ငရုတ်ပင်တွေကြား ပြေးလွှားဆော့ကစားတာ သတိရလိုက်တာဗျာ… ပူလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း….
အလကားစတာ… ဖွေးဖွေး မဖတ်မိပါစေနဲ့… စိတ်ဆိုးသွားမှာစိုးလို့…
ခုလေးတင်ပြန်သွားတာ… အလင်းဆက်ဆိုတဲ့ကောင်လေး ငရုတ်သီးစားပြီး အပျိုးကြီးနဲ့ညားပါစေဗျား…
ဖွေးဖွေးတော့ ငါ့အတွက်…. တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ…
ခပ်စပ်စပ် နှလုံးသားနဲ့သူ ဘယ်သူပါလိမ့်လို့ ဝင်ကြည့်တော့ သူ ကိုး။
ရင်ထဲက ငရုတ်ခင်းက ဒီထက်ပိုများပါတယ်လေ။
ရင်ထဲမှာ ပန်းတွေပွင့်တယ် တို့ ဘာတို့တော့ ကြားဖူးတယ်…
ရင်ထဲမှာ ငရုတ်တွေပွင့်တယ်တော့ ကြားဖူးဘူး…
အခုက ပွင့်ရုံတင်မဟုတ်ဘူးလား… အခင်းကြီးတောင်ဆိုတော့ နည်းမှမနည်းတာ…
ရင်ထဲက အပူမီးတွေကို ငရုတ်နဲ့ဘဲ တင်စားတော့မယ်ဆို ဒါ ပို့စ်မော်ဒန်အသစ်…
(ဘာမှာတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့) … ဆောရီး ဆက်…
အစ ကတည်းက ပူနေပါတယ် ဆိုမှ သူ့လက်ချက်နဲ့ စပ်တာပါ ဖြည့်လိုက်တော့
နာ ကိုယ်တိုင် ပူစပ်ပူလောင်မို့ ရွာထဲလာပြီး ဓာတ်ကူးတာ။
ငရုတ်သီးက ကိုယ့်ကို လှပအောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။
ငရုတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ capsaicin ဓါတ်က အဓိကပါပဲ။ ဒီဓါတ်က အဆီပိုတွေကို လောင်ကျွမ်းဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွန်းအားပေလို့ ဝတ်ကျစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် အနုမြူကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို တားဆီးပေးလို့ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အသားအရေရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အသားအရေရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ substance P ကိုလည်း လျှော့ကျစေပါတယ်။
အစပ်ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပေါ့နော်။
Credit to Enat Myanmar
အပေါ်ပုံထဲ.. jalapeno ဟလပီးနိုငရုပ်သီးက… လက်တီနိုတွေအစားများပြီး.. မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့.. ခရမ်းသီးနှပ်သလို.. ကြိတ်သားတခုခုနဲ့.. အိုးကပ်ချက်ရင်.. ပူစပ်ပူလောင်နဲ့စားကောင်းသဗျ…။
ယူအက်စ်က.. ဟလပီးနိုက.. အရွယ်ကြီးတယ်..။ စပ်တဲ့ကောင်ဆို.. တော်တော့်ကိုစပ်တယ်..။
အနော်တို့ က ငါးဖယ်သွပ်ပြီး ဟော့ပေါ့ထဲ ထည့်စားတယ်။
အသား ကို ဗက်ဂျီမှာ အစာသွတ်တာတွေရေးဦးမှပါ။
သများကို မီးဖိုချောင်ကထွက်မရအောင်လုပ်တဲ့ လူဇိုးဂျီးး
မမဂျိလို့.. ငရုတ်သီး ၂ ဆိုတော့ ၁ က ဘယ်မှာလဲဆိုတော့.. ဒီ လင့် လာပေးဒေ..
အို မချိလဲ စာဖတ်မယ်ဆိုပြီး ဖွင့်လက်တာ..